JOOX မှ POP နှင့် အခြားဂီတအမျိုးအစားများပါဝင်သည့် "ရာနှုန်းပြည့် (JOOX ORIGINAL Album)"ကို စတင်မိတ်ဆက် | MyBiz Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိတွင် Covid-19 ကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုပြုလုပ်ထားခြင်းခံရကာ ဂီတအနုပညာနှင့် ပက်သက်သည့်ပွဲများ ကျင်းပရန် ဆိုင်းငံ့ထားသော်လည်း ယခင်ကကဲ့သို့ သီချင်းသစ်များနှင့် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များကို မျှော်လင့်တောင့်တမှုများမှာ အားကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေပန်းစားလျှက်ရှိသော JOOX အက်ပလီရှင်းမှ ပရိသတ်များ၏ မျှော်လင့်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် အနေဖြင့် ယခုတစ်ခေါက်တွင် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်များဖြစ်သည့် Funk ၊ Soul ၊ Hip Hop ၊ Rock နှင့် Pop ဂီတအမျိုးအစား သီချင်းများပါဝင်သည့် အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုကို JOOX အက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤအယ်လ်ဘမ်တွင် ပါဝင်သည့် သီချင်းများမှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကောင်းမွန်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီသည်ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် “ရာနှုန်းပြည့် (JOOX ORIGINAL Album)” ဟူ၍ အမည်ပေးထားပြီး စုစုပေါင်း တေးသီချင်း ၁၀ ပုဒ် ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အယ်လ်ဘမ်ကို JOOX မှ Full Stop. (ပုဒ်မ.) နှင့်အတူ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး Fireworks Music Production မှ ချမ်းအေးဝင်းက Music Producer အနေဖြင့် ပါဝင်ထားသည်။ ယင်း အယ်လ်ဘမ်တွင် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်း ၁၀ ပုဒ် ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး တေးသံရှင် ၁၂ ဦးမှ ပါဝင်သီဆိုသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် တင်ဇာမော်၏ “သတိ! Q ဝင်နေ သည်” သီချင်းမှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံးအနေဖြင့်ထွက်ရှိထားပြီး ကျန်ရှိသော သီချင်းများကိုလည်း JOOX အက်ပလီကေးရှင်းပေါ်တွင် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အယ်လ်ဘမ်တွင်ပါဝင်မည့် အဆိုရှင်များမှာ ဝေလ၊ အောင်လ နှင့် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ တင်ဇာမော်၊ စန္ဒီမြင့်လွင်၊ Eternal Gosh၊ Thatee ၊ Shine၊ မင်းခန့်၊ Grace နှင့် ထက်သီရိတို့ ပါဝင် သီဆိုထားသည်။
JOOX Myanmar ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Mr. John Zhang က “JOOX အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလက “အလင်းနှင့် အမှောင်” ရော့ခ်ဂီတ သီးသန့်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေနဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ ဂီတအမျိုးအစားတွေပါဝင်တဲ့ အယ်လ်ဘမ်တစ်ချပ်ကို ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်” ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။ “ဒီအယ်လ်ဘမ်ကို ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ ပါဝင်သူတွေအားလုံးက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အားစိုက်ထုတ်ပြီး ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေလည်း နားထောင်ရကျိုးနပ်မယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီအယ်လ်ဘမ်ကို Full Stop. (ပုဒ်မ.) နဲ့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့နဲ့အတူ အလုပ်တွဲလုပ်ရတာကလည်း သိပ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပြီး ဂီတနဲ့ ပက်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ခဲ့တာကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့ အချိန်တွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်” ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
JOOX သည် “Freemium” အခမဲ့ သီချင်းနားထောင်နိုင်ရသည့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားနှင့် မြန်မာအပါအဝင် အာရှဈေးကွက်တွင် ရယူနားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ JOOX ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် အသုံးပြုသူဦးရေ သန်းပေါင်း ၂၉၀ ကျော်ရှိပြီး ၁၅ ဘီလီယံ ကျော် နားဆင်လျက်ရှိသည်။ JOOX သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီမှ အသုံးပြုသူများ၏ ဂီတအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုများအလိုက် ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်။ JOOX တွင် မြန်မာ သီချင်းအားလုံးကို အခမဲ့နားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အချို့သော နိုင်ငံတကာမှ သီချင်းများကိုသာလျှင် VIP Membership ဝယ်ယူ၍ နားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
JOOX အက်ပလီကေးရှင်းမှ မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့သည့် လှုပ်ရှားမှုများမှာ သြဂုတ်လ ၃ရက်မှ ၁၄ရက်အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပထမနှစ်ဝက်ဆုပေးပွဲ၊ World Music Day အထိမ်းအမှတ် “Sounds of Happiness” နှင့် အိမ်မှာနေစဉ်အတွင်း စိတ်ပူပန်မှုများပပျောက်စေရန်နှင့် ကျန်မာရေးပညာပေးများကိုလိုက်နာနိုင်စေရန် စိတ်ခွန်အားပေးသည့် Covid -19 Playlist ကိုလည်း ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
JOOX သည် သီချင်းချစ်သူများအတွက် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော ဂီတ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ JOOX သည် ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းလုံးရှိ သီချင်းပေါင်း သန်း ၃၀ ကျော် ထည့်သွင်းထားပြီး မိမိ အကြိုက်ဆုံး အနုပညာရှင်များ၊ သီချင်းများ၊ အယ်လ်ဘမ် များနှင့် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ထားသော Playlist များနှင့် ဆက်သွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် မိမိ၏ အကြိုက်၊ စိတ်ခံစားမှုတို့နှင့် ကိုက်ညီအောင် အကြံပြုပေးသော သီချင်းများနှင့် ရေဒီယိုလိုင်းများမှ တစ်ဆင့် ကောင်းမွန်သော သီချင်းသစ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ JOOX ကို iOS, Android နှင့် Desktop (Windows / Mac) တို့တွင် ရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုသူများသည် မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အရည်အသွေးမြင့် ဂီတအတွေ့အကြုံကို ရရှိ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
FULL STOP. (ပုဒ်မ.) အကြောင်း
FULL STOP. (ပုဒ်မ.)သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဟစ်ဟော့ပွဲများမှ စတင်ခဲ့ကာ ယခုအချိန်ထိ ပွဲပေါင်း ၅၀ ကျော် စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ Boxing rings များ ကြားမှ Rap battels များသာမက လူစီး သင်္ဘောများပေါ်တွင် ကျင်းပသော အယ်လ်ဘမ်မိတ်ဆက်ပွဲများကိုပါ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ FULL STOP သည် ပွဲစီစဉ် တင်ဆက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်သာမက မကြာသေးမီကလည်း USAID နှင့် UNAIDS တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ဂီတဖန်တီးမှုများမှ တစ်ဆင့် လူအများကို အသိပညာပေးသည့် ပညာပေးသီချင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
MyBiz Myanmar2020-11-25T17:35:10+06:30November 25th, 2020|Biz News|
သင်၏ ၂၀၂၁ နှစ်သစ်အတွက် ရည်မှန်းချက် – ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများနှင့် သင့်ကိုယ်သင် ပြင်ဆင်ထားပါ
မျိုးဆက်သစ် Samsung Galaxy S21 စမတ်ဖုန်းများအတွက် Pre-order (ကြိုတင်မှာယူမှု) များအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်လက်ခံ
OPPO မှ “Picture Life Togther” ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ ထွက်ရှိလာသော OPPO Reno5 ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင် မိတ်ဆက်
ကမ္ဘောဇဘဏ်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနတို့ ဦးဆောင်သည့် ‘Stop COVID-19 Yellow Campaign’ လှုပ်ရှားမှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်
Mytel မှ G Fatt One Man Show အွန်လိုင်း ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည်